XRCDB.DLL FREE DOWNLOAD - DLL - 2019
Nchọpụta nsogbu xrCDB.dll
Nhazi usoro bụ ọrụ bụ isi nke Microsoft Excel. Ikike ịmepụta tebụl bụ isi ndabere maka ịrụ ọrụ na ngwa a. Ya mere, n'amaghi ihe omuma a, ogaghi ekwe omume ime n'ihu n'ihu n'inyocha otu esi eme ihe n'usoro ihe omume. Ka anyị chọpụta otu esi emepụta tebụl na Microsoft Excel.
Na-ejikọ data na data
Nke mbụ, anyị nwere ike jupụta mkpụrụ ndụ mpempe akwụkwọ ndị nwere data nke ga-emecha na tebụl. Anyị na-eme ya.
Mgbe ahụ, anyị nwere ike ịbịaru ókè nke mkpụrụ ndụ, nke ahụ wee ghọọ okpokoro zuru ezu. Họrọ ebe dị na data ahụ. Na taabụ "Home", pịa bọtịnụ "Borders", nke dị na igbe "Font". Site na ndepụta nke mepere emepe, họrọ ihe "Ngalaba niile".
Anyị nwere ike ịdọrọ tebụl, ma site na tebụl a na-ahụ naanị ihu. Microsoft Excel na-aghọta ya naanị dị ka data data, ya mere, ọ gaghị edozi ya dị ka tebụl, mana dịka ọnụọgụ data.
Nweghari data ntanetị na tebụl
Ugbu a, ọ dị mkpa ka anyị gbanwee data data na tebụl zuru ezu. Iji mee nke a, gaa na "Tinye" taabụ. Họrọ ọtụtụ mkpụrụ ndụ na data, wee pịa bọtịnụ "Isiokwu".
Mgbe nke ahụ gasịrị, windo na-egosi ebe a na-egosipụta nhazi nke ọnụọgụ ahọpụtara. Ọ bụrụ na nhọrọ ahụ ziri ezi, ọ dịghị ihe ọ bụla ga-edezi. Tụkwasị na nke ahụ, dịka anyị nwere ike ịhụ, na windo ahụ na-eche ihu okwu bụ "Isiokwu na isiokwu". Ebe ọ bụ na anyị nwere, n'eziokwu, tebụl na isiokwu, anyị na-ahapụ akọrọ a, ma na ikpe na-enweghị isi, a ghaghị iwepụ akọrọ ahụ. Pịa bọtịnụ "OK".
Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị nwere ike iche na e mepụtara tebụl ahụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ ezie na ịmepụta tebụl anaghị esiri gị ike, usoro okike ejedebeghi na nhọrọ nke ala. Ka usoro ihe omume ahụ wee ghọta data dị ka tebụl, ọ dị ha mkpa ka hazie ya, dịka akọwara n'elu.